Home » etn » Hotely any Hawaii: nihena 70 isan-jato ny vola niditra tamin'ny Novambra
Tamin'ny volana Novambra 2020, Hotely Hawaii ny fanjakana dia nitatitra ny fihenan'ny fidiram-bola isaky ny efitrano azo anaovana (RevPAR), ny salan'isa isan'andro (ADR), ary ny toeram-ponenana raha oharina tamin'ny Novambra 2019 satria ny fizahan-tany dia mbola nisy fiatraikany lehibe tamin'ny valan'aretina COVID-19.
Raha ny tatitry ny Hawaii Hotel Performance Report navoakan'ny Diviziona Fikarohana momba ny fizahantany Hawaii (HTA), ny RevPAR nanerana ny fanjakana dia nidina hatramin'ny $ 51 (-75.4%), ny ADR dia nidina hatramin'ny $ 230 (-12.0%), ary ny olona nipetraka dia nihena ho 22.1 isan-jato (-57.0 isan-jato isa) (sary 1) tamin'ny Novambra. Ny valin'ny tatitra dia nampiasa angon-drakitra namboarin'ny STR, Inc., izay manao ny fanadihadiana lehibe indrindra sy feno momba ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Nosy Hawaii.
Manomboka amin'ny 15 Oktobra, ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy ny dia lavitra dia afaka nanalavitra ny quarantine 14 andro tsy maintsy atao miaraka amin'ny valin'ny COVID-19 NAAT tsy mandeha amin'ny laoniny avy amin'ny Trusted Testing and Travel Partner. Na izany aza, nisy politikam-pitsarana vaovao nanomboka ny 24 Novambra nitaky ny fizahan-tany mialoha ny fizotran'ny fizahantany ny mpizahatany trans-Pasifika rehetra mba hanana valim-panadinana ratsy alohan'ny hiaingan'izy ireo any Hawaii, ary ny valim-panadinana dia tsy ekena intsony raha vao tonga ny mpandeha. Hawaii. Ny distrikan'i Kauai, Hawaii, Maui, ary Kalawao (Molokai) dia nanana quarantine ampahany ihany koa tamin'ny volana Novambra. Ankoatr'izay, ny mponin'i Lanai sy ny mpitsidika dia teo ambany baiko nipetraka tao an-trano ny 27 Oktobra hatramin'ny 11 Novambra.
Ny fidiram-bolan'ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia nidina hatramin'ny 70.6 tapitrisa $ (-78.8%) tamin'ny Novambra. Ny fangatahan'ny efitrano dia 307,600 alina alina, na 75.9 isan-jato ambany noho ny vanim-potoana iray lasa izay. Ny famatsiana efitrano dia efitrano fandraisam-bahiny 1.4 tapitrisa (-13.8%) (sary 2). Toerana maro no nakatona na nihena ny fiasa nanomboka ny volana aprily. Raha ny kaonim-ponenana ho an'ny Novambra 2020 dia nisaina nifototra tamin'ny famatsiana ny efitrano nanomboka ny volana novambra 2019, ny habaka dia 19.1 isan-jato amin'ny volana (sary 7).
Ny kilasy fananan'ny trano fandraisam-bahiny any Hawaii manerana ny fanjakana dia nitatitra ny fatiantoka RevPAR tamin'ny volana Novambra raha ampitahaina tamin'ny iray taona lasa. Ny fananana Class Luxury dia nahazo ny RevPAR $ 95 (-74.6%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 543 (+ 5.9%) ary ny haben'ny 17.6 isan-jato (-55.8 isan-jato isan-jato). Midscale & Economy Class fananana nahazo RevPAR $ 47 (-64.4%) sy ny fibodoana 29.0 isan-jato (-52.6 isan-jato isan-jato).
Ny kaontinanta efatra nosy rehetra dia nitatitra ny RevPAR ambany, ny ADR ary ny mponina ao aminy raha oharina ny iray taona lasa izay. Maui Ny trano fandraisam-bahiny County dia nitarika ny kaody tamin'ny volana novambra RevPAR $ 76 (-72.1%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 375 (+ 4.2%) ary ny trano onenana 20.2 isan-jato (-55.0% isa). Ny faritry ny trano fandraisam-bahiny any Wailea dia misy $ 130 (-72.0%) an'ny RevPAR, miaraka amin'ny $ 523 (-5.3%) ny ADR ary 24.9 isan-jato ny isan'ny isan-jato (-59.3% isanjato). Ny faritr'i Lahaina / Kaanapali / Kapalua dia nanana RevPAR $ 51 (-76.3%), ADR tamin'ny $ 345 (+ 15.6%) ary ny haben'ny 14.8 isan-jato (-57.3 isa isan-jato).
Oahu trano fandraisam-bahiny nahazo RevPAR $ 38 (-79.8%) tamin'ny Novambra, miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 167 (-26.7%) ary ny trano onenana 22.6 isan-jato (-59.4 isan-jato teboka). Ny trano fandraisam-bahiny Waikiki dia nahazo $ 34 (-82.1%) tao amin'ny RevPAR miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 162 (-28.5%) ary ny haben'ny 20.8 isan-jato (-62.3 isanjato isan-jato).
Hotely ao amin'ny Nosy Hawaii nitatitra ny RevPAR $ 44 (-76.0%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 217 (-11.0%) ary ny habaka 20.4 isan-jato (-55.3 isanjato isan-jato). Ny trano fandraisam-bahiny Kohala Coast dia nahazo RevPAR $ 57 (-79.0%), ADR tamin'ny $ 388 (+ 11.4%) ary ny haben'ny 14.7 isan-jato (-63.1% isan-jato).
Kauai trano fandraisam-bahiny nahazo RevPAR $ 60 (-67.5%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 215 (-13.2%) ary ny trano onenana 28.0 isan-jato (-46.8 isanjato isan-jato).
Ny latabatra momba ny antontan'isa momba ny zava-bitan'ny hotely, ao anatin'izany ny angon-drakitra aseho ao amin'ny tatitra dia azo jerena amin'ny Internet ao amin'ny: https://www.hawaiitourismauthority.org/research/infrastructure-research/